Sipo nemvura, naMarta D. Riezu
Sophistication mukutsvaga kugona mufashoni. Chiyero ichocho chekunaka chinotsvaga kusimudza imwe mhando yeatari pane kumira kunze, chinogona kukonzera mhedzisiro. Zvingatove kuti rimwe zuva anobuda mumugwagwa asina kupfeka samambo uya ari munyaya, achifunga kuti ari kuenda...
Prometheus, naLuis García Montero
Jesu Kristu akakunda miedzo yadhiabhorosi isingakundiki kuti aponese vanhu. Prometheus akaita zvimwe chetezvo, achifungawo chirango chaizouya. Kurambwa kwakagadzira ngano uye ngano. Tariro yatinogona kuwana zvechokwadi pane imwe nguva neiyo fomu yehugamba yakadzidza kakawanda uye kuti...
Peji1 Peji2 ... Peji5 Zvadaro →